​दिल्लीबाट नेपालमाथि प्रहार
Monday, 28 Aug, 2017 10:19 PM
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रमुख कार्यकारी भन्नै नसुहाउने प्रकृतिका व्यवहार र अभिव्यक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । उनका अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण राष्ट्रको शिर निहुरिएको अनुभव आम नेपालीले गरेका छन् भने बौद्धिक जमातका बीच उनको व्यापक आलोचना र टीकाटिप्पणी समेत गरिएको छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि सत्तारुढ दलकै नेता पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले देउवाको प्रस्तुतिलाई असान्र्दिक, अनपेक्षित र असहाउ“दिला हर्कतका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
वास्तवमा देउवाको दिल्ली दौड आफैमा असान्दर्भिक र प्रयोजनहीन थियो । देउवाले यतिखेर भारत भ्रमण गरेर ६—६ महिनाको फरकमा नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली जान्छन् र केवल आशिर्वाद थापेर फर्कन्छन् भन्ने सस्ता टिप्पणीलाई एकातिर ठाउ“ दिएका छन् भने अर्कोतिर कुनै नया“ एजेन्डाबिना भारत जाने निर्णय गरेर नेपालमा गरेको शपथले नपुगेर दक्षिणी शक्तिसामु शपथ गर्न पुगेको भन्नेसम्मका आलोचना जनस्तरबाट भएका छन् । राजनीतिक र बौद्धिक जगतभन्दा तल ओर्लेर आमनागरिकको तहसम्मै यस खालका टिप्पणी र मनोविज्ञानको विस्तार हुनु एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमानी राष्ट्रका निम्ति दुःखद हो ।
देउवाले दिल्लीमा दुवै मुलुकका राष्ट्रप्रमुखद्वारा गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्ति झनै लज्जाजनक र आपत्तिजनक छ । उनले उक्त अवसरमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउ“दै संविधानप्रति दक्षिणी भेगका जनताको समर्थन जुटाउने भनेका छन् । एक त नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको संविधानप्रतिको विश्वास र आस्थामाथि नै उनले विदेशीको सामु उभिएर प्रहार गरेका छन् । अर्को, नेपालको संसदले मतदानको प्रक्रियाबाट टुंग्याइसकेको विषयलाई पुनः विवादित रुपमा उठाउने काम गरेका छन् । र, वक्तव्यका क्रममा पनि उनले अत्यन्त अप्रासंगिक, भद्दा र अशोभनीय तरिकाले यो प्रसंग उप्काएका छन् ।
नेपाली जनता, नेपालको सार्वभौम संविधानसभा र संसदकै अवमूल्यन हुने गरी विदेशीका सामु संविधान संशोधन गर्ने कसम खानु सामान्य विषय होइन । कुनै पनि राष्ट्रप्रति वफादार नागरिकले यो हदसम्मको हर्कत गर्न सक्दैन । त्यसमाथि यही संविधानको प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुनिएका र यही संविधानअन्तर्गत रहने शपथ खाएका व्यक्ति विदेशी भूमिमा गएर कसरी आफ्नै देशको संविधानविरुद्ध उभिन सके ? कुन शक्तिको आड वा दबाबमा उनले यो अभिव्यक्ति दिए ? कुन शक्तिलाई खुसी पार्न उनले नेपाली जनताको आस्था, विश्वास र बलिदानीमिश्रित आधार दस्तावेजमाथि प्रहार गर्न सके ? यसको जवाफ खोजिनुपर्छ ।
देउवाले राजपालगायत दक्षिणी भागका जनताको असन्तुष्टि भन्दै संविधानप्रतिको स्वीकार्यताबारे जुन टिप्पणी गरेका छन्, त्यो सरासर गलत र खेदजनक छ । दक्षिणमा बस्ने सारा समुदायको असन्तुष्टि संविधानमा होइन र छैन पनि । जुन कुरा पछिल्लोपल्ट स्थानीय तहको निर्वाचनमा संशोधनपक्षधर संगठनहरुको पराजित अवस्थाले समेत स्पष्ट खण्डित गरिसकेको छ । जनताबाट बहिष्कृत एजेन्डा र मागलाई कुनै समुदायविशेषको टाउकोमा थोपर्न खोज्नु बदनियतबाहेक केही होइन । मानौ“, राजनीतिक रुपमा कुनै पनि विषयमा नेपालको कुनै शक्ति, संगठन वा समुदाय असन्तुष्ट हुन सक्छ । यो नित्तान्त आन्तरिक मामिला हो र तिनका असन्तुष्टिको सम्बोधन विधिसम्मत र न्यायोचित तरिकाले यही मुलुकको सरहदभित्रै यही“का विधि र संयन्त्रबाट गरिनुपर्छ । नकि, कुनै ठूल्दाइको आ“गन वा अदृश्य प्रभुको इशारामा गरिने काम हो यो ।
कुनै पनि जिम्मेवार र परिपक्व राजनीतिज्ञले यो हदसम्मको गल्ती गर्छ भनेर कल्पनासमेत गर्न सकि“दैन । तर, चार—चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले आफ्ना घरेलु मामिलालाई विदेशीका सामु यसरी छताछुल्ल पार्नु अपरिपक्वता मात्रै भनेर पन्छिन सकि“दैन । यो त गम्भीर भूल हो । राष्ट्र र राष्ट्रियताविरोधी हर्कत हो । नेपाली जनताको अपमान हो । ०६२÷६३ पछिको परिवर्तनमाथिको गम्भीर प्रहार हो । यो हदसम्मको गल्तीका प्रति प्रधानमन्त्री र उनको दल नेपाली कांग्रेसले अविलम्ब माफी माग्नुपर्छ । होइन भने विदेशमा गएर आफ्नै देशको संविधानमाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री मुलुकलाई चाहिएको छैन ।